चिकित्सक र नर्सलाई कोरोना देखिएपछि नेपालगन्ज मेडिकल कलेजको प्रसूति गृह सिल- प्रदेश ५ - कान्तिपुर समाचार
बाँके — चिकित्सक र नर्सलाई समेत कोरोना पुष्टि भएपछि कोहलपुरस्थित नेपालगन्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालको प्रसूति गृह सिल गरिएको छ । शुक्रबार बाँकेका ४९ जना कोरोना संक्रमित पुष्टि भएकामध्ये ६ जना यही मेडिकल कलेजका स्वास्थ्यकर्मी थिए । जसमा एक जना चिकित्सक र ५ जना नर्स थिए । संक्रमित स्वास्थ्यकर्मी प्रसूति गृह(लेबर रुम) मा कार्यरत थिए ।
अस्पतालको सहायक निर्देशक डा. दिनेश श्रेष्ठका लेबर रुम सिल भएकाले अत्यावश्यक बिरामीलाई नेपालगन्जको भेरी अस्पताल र मेडिकल कलेजमा रिफर गर्नुपरेको बताए । उनले पीसीआर रिर्पोट ढिलो आउँदा स्वास्थ्यकर्मीले ढुक्क भइ काम गर्न नसकेको सुनाए । २१ गते अस्पतालका १० जना स्वास्थ्यकर्मीको पीसीआर रिपोर्ट पठाएकोमा ५ जनाको मात्रै शुक्रबार रिपोर्ट आएको थियो । अरु ५ जना आत्तिएर अस्पतालमै बसेका छन् ।
त्यस्तै, शनिबार ५० देखि ६० जना स्वास्थ्यकर्मीको पीसीआर जाँचका लागि पठाउनु पर्ने छ । रिपोर्ट समयमै नआउँदा काम गर्न असहज भएको डा. श्रेष्ठले सुनाए । उनका अनुसार अस्पतालको मर्चरीमा दुई वटा शव राख्ने क्षमता छ । यद्यपि पीसीआर रिपोर्ट ढिला आएकै कारण तीन शव थपेर राख्न बाध्य भएको बताए । ‘बेलैमा रिपोर्ट आइदिए शव व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुन्थ्यो’, उनले भने । अस्पतालमा दैनिक १० देखि १५ जना सुत्केरी आउने गर्छन् । अस्पतालको लेबर रुप सिल भएकाले बिरामीले अनावश्यक दुख झेल्नु परेको उनले सुनाए । स्वास्थ्य कार्यालयका फोकल पर्सन नरेश श्रेष्ठले भने स्वाब संकलनमा ढिलाइ गर्दा र प्रक्रिया पुर्‍याउँदा कम्तीमा तीन दिन लाग्ने बताए । उनले पीसीआर रिपोर्ट समयमै बुझाएको दाबी गरे ।
प्रकाशित : श्रावण २४, २०७७ १०:०२
काठमाडौँ — युरोपेली च्याम्पियन्स लिगमा नेपाली समयअनुसार शनिबार राति पौने एक बजे अन्तिम १६ को दोस्रो लेगमा बार्सिलोनाले नेपोलीको सामना गर्दैछ । पहिलो लेगको खेल १–१ को बराबरीमा टुंगेको थियो । त्यसैले दोस्रो टाइमा बार्सिलोना आफ्नै घरमा खेल्दा क्वाटरफाइनल पुग्नका लागि बलियो प्रत्यासी हुनेछ ।
ला लिगाको उपाधि होडमा रियल म्याड्रिडसँगको दौडमा पछि परेको बार्सिलोनाले अब आफू युरोपेली च्याम्पियन्स लिगबाट बाहिरिएको कल्पना पनि गर्न सक्दैन । एक प्रकारले यो अन्तिम १६ को टाइमा बार्सिलोना सुरक्षित पनि छ । उसले नेपोलीको मैदानमा खेलेको बराबरीमा एक घर बाहिरको गोलको उपलब्धि हात पारेको थियो ।
ड्रिस मार्टेन्सको गोलका विरुद्ध बार्सिलोनाका लागि एन्टोन ग्रिजमनले बललाई सफलतापूर्वक पोस्टको दिशा दिएका थिए । तर बार्सिलोनाका लागि समस्या कहाँनिर छ भने क्याम्प नुमा सबथोक राम्रो भइरहेको छैन । प्रशिक्षक क्विक सेटिन चर्को दबाबमा छन् । अन्तिम पटक पाँच वर्ष अगाडि युरोपेली च्याम्पियन भएको बार्सिलोना छैटौं उपाधि जित्ने अभियानमा छ ।
पहिलो लेगको खेल भएयता लियोनल मेसी आफै पनि ३३ वर्षका भइसके । उनका लागि फेरि एकपल्ट युरोपेली उपाधि उचाल्ने सम्भावना समयका आधारमा झन झन कमजोर हुँदैछ । त्यसैले मेसी स्वयं च्याम्पियन्स लिगमा राम्रो गर्न प्रेरित रहनेछन् ।
नेपोलीले भने यस सिजन इटालियन कप जितिसकेको छ, त्यो पनि युभेन्टसलाई पन्छाएर । त्यसैले उसले पेस गर्ने चुनौती पनि बार्सिलोनाका लागि कम हुने छैन ।
प्रकाशित : श्रावण २४, २०७७ १०:००